Days दिन जसले हाम्रो जीवन परिवर्तन गर्‍यो - जिओफुमाडास
राजनीति र लोकतन्त्रको
Days दिन जसले हाम्रो जीवन परिवर्तन गर्‍यो
जुन, 2009 राजनीति र लोकतन्त्रको
पछिल्ला केही दिनहरू एक अर्काबाट एकदम फरक भएका छन्। प्रत्येक एक फरक स्वाद छ, स्वाद यति ध्रुवीकृत छ कि लाज छ, जबकि मिठाई को लागी खट्टा, केही मा यो अन्य तरिका मा आसपास हुन्छ। सबैको लागि, पृष्ठभूमि स्वाद पित्तको जस्तै हो म एक विचारधारावादी छैन न त यो मेरो विषय हो, म गलत श्रेणीमा पोष्ट छोडेर6दिन बताउछु समर्पित नीतिको लागि।
1 दिन बिहीबार हामी स्वतन्त्र, सार्वभौम गणतन्त्र थियौं, उनीहरू स्वतन्त्र भन्छन्, धेरैलाई अज्ञात कार्टोग्राफीमा थोरै नुहाउँदछन्, जस्तै उनीहरूले हामीलाई बताउँदछन् टोगो कहाँ छ र हाम्रो छैठौं कक्षा खराब छ। दिउँसो म घरतिर लागें, किनकि सडकबाट हिंड्नु जोखिमपूर्ण थियो, यस्तो अनौंठो देखिन्थ्यो कि यस्तो नियमित शहरमा यस्तो हुन सक्छ, यदि प्रथा भन्ने हो भने यो बरसातको आसन्न भेद्यताको कारण।
2 दिन शुक्रबार हामी अमेरिकी राज्यहरूको संगठनसँग असहमत भयौं, जहाँ स्थायी काउन्सिल बैठकले यस निकायका राजदूतले घोषणा गरेको धम्की देखेर आश्चर्यचकित भयो र सर्वसम्मतिले स्वीकार्य छ कि सबै कुरा एकदम नराम्रो हुँदै गइरहेको देखिन्छ। म घरमा बोर भएँ, केही गर्नै छैन, स्कूलमा बच्चाहरूसँग र लेख्न चाहन्न ... यो अनिवार्य बिदाको आनन्द लिन गाह्रो हुन्छ, जब त्यहाँ धेरै योजनाहरू हुँदैन र अफिसमा धेरै गर्नु हुँदैन, म भाग्नको लागि गएँ र एउटा लेखें विषयवस्तुको प्रस्ताव.
3 दिन शनिबार म डोनट खानको लागि राष्ट्रपति भवनको अगाडि पार भएँ, र आन्तरिक मेयरहरूले मलाई चकित पारेका सबै चालहरू मैले देख्न सकें, यो सबै एकदम रोमाञ्चक लाग्थ्यो, यद्यपि भोलिपल्ट के हुने होला भनेर डरलाग्दो थियो। म मेरो साथी बुन्डेआलाई भेट्न गएँ र केही पेयहरूमा उनले मलाई "थ्री थ्री युनिकोर्न्स" मा क्याप्टेन हड्डकको शैलीमा केही ओरेकलहरू भने। यो विल स्मिथ फिल्म "सात पाउण्ड" मा एक नजर लिन र यो संसारमा राम्रो मान्छेहरू छन् कि सपना देख्न राम्रो लाग्यो, एक पल को लागी सोचें कि यदि यस देशका सबैले यो एक पटक गरे।
4 दिन आइतवार, विश्वको एक ठूलो भागलाई विदेशमा के प्रसारण भयो भनेर थाहा थियो, अझै पनि बर्बरतामा बस्ने मानिसहरू छन् भन्ने कुरा जान्दछन्, र ह्युगो चाभेजले यस देशलाई कुनै पनि समयमा आक्रमण गर्ने आश्वासन दिए। हामीसँग इन्टरनेट थिएन, बिजुली थिएन, कुनै राज्य टेलिफोनी थिएन। लामो लाइनमा ईन्धन ट्या tank्क भर्न र सुपरमार्केटमा क्यान्ड खाद्य किन्नको बाहेक घर छोड्न सम्भव थिएन। यो म्याकोन्डोमा जस्तै वर्षा भयो, उत्तरमा एउटा पूल सुकियो र त्यस दिनदेखि हामीले राती at बजे सुरू गर्यौं।
5 दिन सोमबार हामी अशान्ति को एक दिउँसो बस्ने, लाठी, ढुङ्गा सडकमा मा मान्छे, म पनि म एक हाडजोर्नी बिस्तर, तब पहिलो पटक एक लामो समय मा म काम गर्न गएनन् किन्न सोमवार चाहन्थे जहाँ पसलमा सकिएन, बस कुनै किनभने जान चाहन्छु। केन्द्रीय अमेरिकी एकीकरण प्रणाली SICA म दोस्रो ग्रेड मेरो स्कूलमा देखे ती समान संकेत संग फेसबुक मा उनको फेला यो व्यापार गर्न हाम्रो सीमाना बन्द थियो, र एक डोनट दुर्गम थियो खान मेरो मनपर्ने ठाउँ भनेर यसो, छैन स्मृति छ तर त्यो मेरो आठ वर्ष मध्ये एक हो: "28 फेब्रुअरी लोकप्रिय लीगहरू"।
6 दिन म Tuesday्गलबार पार्कमा ठूलो भीड जम्मा भयो र उनीहरूले आफ्नो मनसायबाट भित्री हृदयबाट प्रचार गर्ने क्रममा संयुक्त राष्ट्र स Organization्घीय संघले घोषणा गर्यो कि संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत यस मुलुकमा हस्तक्षेप गर्न आफूले सकेजति सबै गर्नेछु जुन "संयुक्त राष्ट्र संघ" कार्यको प्रायोजक "। म यी सबै भीडको उत्कटता देखेर खुसी भएँ, यद्यपि मेरो सानो साना माछाका साथीले तेस्रो रम पछि उनको एउटा दर्शन गरे: "मलाई आश्चर्य छ कि यदि हामीले बाह्र गिरोहका सदस्यहरूलाई उनीहरूको निधारमा ट्याटू लगाएर छोडिदियौं भने, यिनीहरूमध्ये कति जना वरपर हुनेछन्"। यसले मलाई आश्चर्यित तुल्यायो तर यसले मलाई आश्चर्यचकित पार्‍यो कि यदि हाम्रा नेताहरूसँग world२ घण्टा भन्दा कममा सम्पूर्ण विश्वलाई विश्वस्त तुल्याउने समय छ भने।
म के भन्न सक्छु, झन्डै बोरिंग शान्तिबाट मैले महसुस गरें कि परम्परागत गृहयुद्ध नभएको देशको निर्दोष शान्ति मूल्यवान छ। "। अब सम्पूर्ण विश्वले के भयो भनेर भर्त्सना गर्छ, यद्यपि तपाईसँग राजधानीमा नै दुई अवस्थित स्थितिहरू मध्ये एक हुनुपर्दछ र335 ग्रामीण नगरपालिकाहरूसँग एकैचोटि काम गर्नुपर्दछ कि उनीहरू अन्तर्देशीय के सोच्दछन् भन्ने बारे। सारांशमा, दुई मुख्य स्थितिहरू भौगोलिक निर्देशांकमा मिनेट जति गोलाकार हुन्छन्: पहिलो कि त्यहाँ कुटपत्ता थियो, अर्को संवैधानिक उत्तराधिकार। जे भए पनि, दुबैले कौमार्यको शाब्दिक क्षति पछि दिनको अनुभूति गराउँछन्।
यो जीवन कत्ति रमाईलो छ, सज्जनहरू, छ दिनमा 7० लाख भन्दा बढी व्यक्तिको जीवन परिवर्तन भएको छ जो निश्चित रूपमा यस्ता भावनाहरू मार्फत जान्छन्, साथै उनीहरूका आफन्त र साथीहरूको विदेशमा षडयन्त्रको योग जसको लागि मलाई यो वर्णन गर्न गाह्रो भएको छ। यहाँ के भइरहेको छ मलाई मात्र थाहा छ कि हामी यससँगै बाहिर आउनेछौं र सम्पूर्ण देशले यस्तो रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ जुन जीवन र परिपक्वताको उत्तम अवस्थामा अन्त हुन्छ; हामी केवल आशा गर्दछौं कि यो दर्दनाक छैन र यो एक पटक र सबैको लागि हुन्छ।
दिन7के हुनेछ, जस्तै 8 र वर्ष बाँकी रूपमा रोमाञ्चक सम्म तिनीहरूले चुनाव 28 नोभेम्बर पुग्न हुनेछ, मेरो स्थिति स्थान थप अन्तर्राष्ट्रिय दर्शक लागि लेखन र मेरो व्यक्तिगत राय देखाउन चाहनुहुन्छ नगर्ने ती तटस्थ छ म मेरो साथी, Macondo संग बोली गर्नुभएको गर्दा, म महान् पियानो रूपमा यति धेरै pedals छ महसुस मेरो किशोरावस्थामा; यो राजनीतिक मात्र होइन, आर्थिक हो, यो कानुनी छ, अब भूराजनीतिक छ, हामी सबै सहमत छौं कि यो सामाजिक हो र मलाई चिन्ता गर्ने कुरा वैचारिक हो। यो दुःखलाग्दो हुनेछ यदि यी सबै प्राकृतिक अराजकताले महत्त्वपूर्ण रूपान्तरणहरू उत्पादन गर्दैन भने, किनभने त्यसो भए हामीले २० वर्षसम्म भोग्न सक्छौं किनकि हाम्रा नजिकका छिमेकीहरूसँग दिनको दुई पटक इन्टरनेट वा केबल ड्रपको तुलनामा बढी मूल्यमा भयो।
होन्डुरानहरूलाई अभिवादन, तपाईले देख्न सक्नुहुने नै, राष्ट्रिय टोलीले मेक्सिकोलाई हराउँदा मात्र (जुन धेरै पटक होईन) देशभक्ति प्रदर्शन गर्न सकिन्छ। यदि तपाईं अब यो सबै जोशका साथ प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ, यो गर्नुहोस्, जबसम्म तपाईं अरूको ईमान्दारीलाई हानी गर्दैन। विश्वको बाँकी ठाउँहरूमा, तपाइँको प्रार्थनाको लागि धन्यवाद।
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो होन्डुरस को मामला, कहानी गरौं
अर्को पोस्ट कसरी जान्न धेरै मानिसहरू एक मार्चमा छन्अर्को »
Rep लाई जवाफ दिनुहोस् "days दिन जसले हाम्रो जीवन परिवर्तन गर्‍यो"।
जुलाई, 2009 बजे
होन्डुरस मा क्रिसमस मा अद्यतन - 1 जुलाई 2009
दिन तिगुसिगलपा र बाकी देशमा अपेक्षाकृत शान्त थियो। देशभरका धेरै भागहरूमा प्रदर्शन र राष्ट्रपति जेलियाको बाहिरी बिरोधमा प्रदर्शन जारी रहन्छ। आजको सबैभन्दा महान् सभाहरू उत्तरी शहर सीबामा र मिल्लिटीको सरकारको समर्थनमा दुवै दक्षिणी शहर चोलुटिकामा भएको थियो। कुनै महत्त्वपूर्ण घटनाहरू रिपोर्ट गरिएको थिएन।
हालको घटनाक्रममा संगठन द्वारा लिइएको स्थितिको विरोधमा 250 मानिसहरूको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन यो रात साँझ संयुक्त राष्ट्र गृहको सामने आयोजित भएको थियो, जसले सोधिन्छ कि संगठनले आफ्नो आवाज सुन्नु र हौण्डुरसमा लोकतान्त्रिक समर्थन गर्ने।
श्री मिचालीले आज नयाँ मन्त्रीहरू नियुक्त गरे, आफ्नो कैबिनेटलाई 90% पूरा गर्न लायक। राष्ट्रपति जिल्याका सरकारका केही सदस्यहरू।
न्याय सर्वोच्च अदालतले यो गिरफ्तारी र expulsion सहित हाल दिनमा न्यायपालिका संस्थाहरू द्वारा लिएको को कार्यहरु लागि कानुनी आधार बताछन जसमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय लागि विशेष विज्ञप्ति (मिलयो), सबै निर्णायक द्वारा हस्ताक्षर, जारी राष्ट्रपति जेलिया। को विज्ञप्ति को अनुच्छेद 8, विशेष राज्य अमेरिका मा त्यो राष्ट्रपति Zelaya विरुद्ध अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी को वारंट अब सम्म रह्यो थियो गोप्य।
सशस्त्र बलहरूले पनि एक प्रेस टिप्पणी (संलग्न) जारी गरे जसमा उनीहरूले आफ्नो कार्यलाई संवैधानिकको रूपमा स्वीकृत गरे।
मानवअधिकारका लागि राष्ट्रिय आयुक्त, जसले नयाँ सरकारलाई समर्थन गर्दछ, ले हन्डन्डुर मानिसहरू सोध्न चाहेनन् भने उनीहरूले राष्ट्रपति जेल्टाको पुनर्स्थापनाको साथमा सहमति लिने सन्दर्भमा प्रस्तुत गरेका थिए। तथापि, यो समाधानले कानूनी र व्यावहारिक सर्तहरू दुवैलाई बेवास्ता गर्दछ।
केहि सार्वजनिक अधिकारीहरु द्वारा विशेष घोषणा, विशेष गरी नियुक्त विदेश मंत्री, OAS, संयुक्त राष्ट्र र सामान्य हस्तक्षेप मा टोन मा बढदै छन्, र राष्ट्रपति चावेज वेनेजुएला को बिरुद्ध धेरै मजबूत जोर संग।
सार्वजनिक मिडिया (रेडियो, टिभी, अखबारहरू) नयाँ सरकारको समर्थन गर्दछ र उद्यमीहरूको संगठन (COHEP) लाई यसका लागि समर्थनको बयान पनि जारी गरिएको छ। यद्यपि प्रो-जेलिया थिए केही मीडिया (टिभि च्यानलहरू र रेडियो स्टेशनहरू), तथापि, (केही स्थानीय रेडियोहरू र विशेष रूपमा एक राष्ट्रिय टिभी च्यानल) बन्द छन् वा सीमित प्रसारणहरूसँग।
विस्फोटक यन्त्रहरूले कल रातलाई निजी गाडीबाट सुप्रीम कोर्ट र जनरल अटार्नीको भवनको विरुद्धमा कुनै पनि पीडितको कारणले फेंकिएको थियो।
को OAS साधारण सभाले को तख्तापलट d'état Condemning बिहान एक संकल्प स्वीकृत, त्यो हन्डुरास को संवैधानिक राष्ट्रपति हो Reaffirming र निर्देश पनि महासचिव लोकतन्त्र र व्यवस्था को नियम र राष्ट्रपति को बहाली बहाल गर्ने उद्देश्य कूटनीतिक पहल उतरदायित्व लिनु गर्न त्यो मैनुअल Zelaya Zelaya, हन्डुरस सदस्यता निलम्बन गर्न धम्की दिइयो यी पहलहरू असफल हुन सक्छ। को OAS प्रतिनिधि हामीलाई एसजी, चाँडै हन्डुरास भ्रमण हुनेछ त्यो अन्य देशहरूमा (छैन राष्ट्रपति) को प्रतिनिधिहरु सँगसँगै अवगत।
माथिको आधारमा, राष्ट्रपति जेलिया (अहिले पनामामा) ले अर्को शनिबारसम्म हन्डुरसमा फर्किने निर्णयको निर्णय गरेको छ।
होन्डुरस (जी-जीएनएनएमएक्स) मा डोनर्सको समन्वय समूहले संयुक्त राष्ट्रमा आज अवस्थाको समीक्षा गर्नको लागि भेट्यो। स्पेन, इटाली र फ्रान्सले जानकारी दिए कि उनीहरूको दूतावासलाई परामर्शको लागि सम्झौता गरिएको छ। जर्मनीले जानकारी दिएको छ कि आफ्नो राजदूतको प्रस्थान केवल मिशनको अन्त्यको कारण थियो। आईडीबी र बीसीआईईले भुक्तानी निलम्बित गरेको छ; डब्ल्यूबी समान स्थितिमा छ किनकि कानुनी कारणहरूका लागि यो "निलम्बन" शब्द प्रयोग गर्न सकिँदैन। अन्य सहयोगी कार्यक्रमहरू औपचारिक रूपमा रोकिएको छैन तर नयाँ सरकारको साथ सम्पर्कबाट बच्नको लागि सबैले निर्देशन पाएका छन्।
अमेरिका र युएसईका हन्डुरानका दूतावासहरूले "स्विट्जरल्याण्डलाई" स्विच गरेको देखिन्छ किनभने उनीहरूले हन्डुरुरमा भएको क्युपलाई इन्कार गरे। राष्ट्रपति Zelaya ले आफ्नो भत्ता घोषणा गरेको छ। यसबाहेक, मिशेल मिल्लिलीको विदेशमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघ र ओएएसका दूतावासहरूलाई सम्झाउनुभएको छ। दुवै संगठनहरु लाई स्पष्ट रूप देखि बताईएको छ कि उनि अन्य प्रतिनिधिहरु को पहिचान नहीं गर्नेछन्।
मानव अधिकार आइजहरू
क्ग्रेसले श्री मिचेलेट्टीले हिजो हस्ताक्षर गरेको आदेशलाई कला अनुरूप स्वीकृत गरेको छ। संविधानको 187, कर्फ्यू (अब 10pm बाट 5am)3अधिक दिनको लागि बढाइएको छ। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र आन्दोलन, स्वतन्त्र संघ र पुनर्मिलनको अधिकार, मनमानी गिरफ्तारको निषेध लगायत कर्फ्यूको समयमा धेरै अधिकारहरू प्रतिबन्धित छन्। यसले सामाजिक र मानव अधिकार संगठनहरुमा गम्भीर चिन्ता खडा गरेको छ किनकि उनीहरु डराउँछन् कि यसले सेना र पुलिसले श्री ज़िलाका समर्थकहरुमाथि दमनको सुविधा प्रदान गर्दछ।
अप्रत्यक्ष रिपोर्टहरू प्रहरी र सशस्त्र सेनाहरूले आरोप लगाएका दुर्व्यवहारहरूको सम्बन्धमा परिसर जारी राख्छन्, विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रहरूमा, मनोनयन गिरफ्तारहरू, युवाहरूको बाध्यता भर्ती, स्थानीय रेडियो च्यानलहरू बन्द। संयुक्त राष्ट्रका निवासी समन्वयक परिस्थितिबारे रिपोर्ट गर्नको लागि मानवअधिकारका उच्चायुक्त क्षेत्रीय कार्यालयसँग निरन्तर सम्पर्कमा छ।
माथि उल्लेखित प्रदर्शनको कारण संयुक्त राष्ट्र कार्यालयहरू यो दोहोरो एक सावधानीको उपायको रूपमा खाली थिए।
चरण2मा देशभरको प्रभावमा रहनेछ। संयुक्त राष्ट्रले केवल आवश्यक कर्मचारीहरूको साथ मात्र काम गर्दछ।
हन्डुरस मा विजेता: चावेज
एलएलवीरो वर्जार लेलुस द्वारा
प्रकाशित: जुन 30, 2009
हन्डुरस को कर्तव्य सम्म पुग्ने हप्ताहरुमा, राष्ट्रपति मनुअल जेलिया,
भेनेजुएला को ह्यूगो चावेज को एक सहयोगी, उनले जान्दथे कि उसले के गरिरहेको थियो। मा
संवैधानिक बलियो बनाउन प्रयास गरेर लोकतान्त्रिक सीमा धकेल्न
उसको पुन: चुनावलाई अनुमति दिईरहनु भएको छ, मैले यसका लागि जाल मिलाएँ
सेना। सेना यसको लागि गिर गयो, एक अनपोल्युल राष्ट्रपति को बारी
एक अन्तर्राष्ट्रिय कारण célèbre मा उनको शब्द को अन्त को नजिकै थियो।
यद्यपी कूपन हन्डुरस मा लोकप्रिय समर्थन छ, यो पनि अनुमति छ
श्री चभेज, जसले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियाको नेतृत्व गरिरहेको छ
नैतिक उच्च जमीन। कोप नेताहरू, जसले श्रीमतीलाई रोक्न खोजिरहेका थिए।
हजुरआमाले आफ्नो गुनासो ल्याउन चावेजले उसलाई छोडिदिए
यस क्षेत्रमा अधिक बल।
श्री चावजे चाँडै श्री श्रीलंका को समर्थन मा बाहिर आए। मैले धम्की दिएँ
सैन्य कार्रवाई संग होन्डुरस र निकारागुआ गए जहाँ एक बैठक
अमेरिकाका लागि बोलिभेरियन वैकल्पिकको क्यारकास-नेतृत्व
अमेरिकी नेतृत्वको मुक्त व्यापार क्षेत्रको विकल्पको रूपमा जन्मिएको गठबन्धन
अमेरिका, ल्याटिनको चार्ज लिन उत्तम अवसर थियो
अमेरिकी प्रो-जेलिया प्रयास।
अमेरिकी राज्यों को संगठन पछि कोइप (अन्य
ल्याटिन अमेरिकी सरकारहरूले सूट गरे) र यसको महासचिव
निकारागुआमा आइपुग्यो, जहाँ एक व्यापक क्षेत्रीय बैठकको व्यवस्था गरियो। श्रीमान्
चावेजले मञ्ज जेलियालाई भेला गर्ने क्रममा उडान गर्न विमानस्थल पठायो, भित्री
निकारागुआको राजधानी, मनागुआमा हवाईअड्डामा स्वागत गर्दै।
स्पैनिश-भाषा समाचार मिडियामार्फत, को पुनरावर्ती छवि
पछिल्लो दुई दिन श्री चावजे र उनको सहयोगीहरु काम गर्दै छन्
हाउन्डुरन लोकतान्त्रिकको लागि। संयुक्त राज्य 'अधिक मापन गरियो
प्रतिक्रिया, र केहि दक्षिण अमेरिकी द्वारा लिइएको कम-प्रोफाइल अवस्था
सरकारहरू द्वारा शुरू भएको उच्च-ठूला अभियानमा हराएको छ
भेनेजुएला को कडोलो
यो होन्डुरसको स्थापना के हो भने, श्री चावेजको डरलाग्दो
बढ्दो प्रभाव, इरादा जब यो श्री जेल्या देखि छुटकारा पाएको थियो। यो हो
पनि क्यारियर पछ्याउने घटनाहरूका घटनाहरूको सुन्दर सुन्दर मोड
को राष्ट्रपति को। हन्डुरसको उडेको ओलिग्रार्डको सदस्य, श्री
Zelaya लिबरल पार्टी, एक नेता को रूप मा 2006 मा शक्ति मा आए
केन्द्र-दायाँ संगठन उहाँ स्थापनाको उत्पादन हुनुहुन्थ्यो: ए
परिवारको भाग्यको उत्तराधिकारी
र वानिकी उद्यमहरू, मध्य अमेरिका मुक्त व्यापारलाई समर्थन गरे
संयुक्त राज्यसँग सम्झौता, र राष्ट्रपतिको लागि
रूढ़िवादी प्लेटफर्म, अपराधमा सतावट र कटौती गर्ने प्रतिज्ञा
उनको शब्दमा लगभग आधे बाटो, तथापि, श्री जेल्या एक स्पष्ट थियो
ईमानदार ईपीभीनी र श्री चावेज को प्रशंसक बने। मैले साइन इन गरेको छु
भेनेजुएलाबाट उदार तेलको सब्सिडीको सम्झौता; गत वर्ष
को लागि बोन्डिभेरियन वैकल्पिक मा होन्डुरस शामिल छ
अमेरिका। चाँडो पर्याप्त, शक्ति तिनको टाउकोमा गए।
नवंबरको लागि निर्धारित सामान्य चुनाव पछि डराउन थाले, श्रीमान्
Zelaya को अनुमति को अंतिम लक्ष्य संग एक रेफैंडमंडल को फैसला गरे
उसले पुन: चुनाव खोज्छ। यस कदमले लेखहरूको उल्लङ्घन गर्यो
संविधानले राष्ट्रपतिको सीमामा परिवर्तन गर्न अस्वीकार गर्यो
चार वर्षको अवधि र संवैधानिकको लागि कानूनी प्रक्रिया स्थापित गर्नुहोस्
संशोधन। निर्वाचन अदालत, सर्वोच्च अदालत, अभियुक्त
सामान्य, कांग्रेस र उनको आफ्नै पार्टीका सदस्यहरु श्री जेलाया को घोषणा गरे
अवैध इरादा। त्यसपछि, आइतवारमा सैन्य कदम चाल्नुभयो।
आदर्श समाधान श्री जेल्या को लागि सत्ता मा फर्कन को लागि हुनेछ
अर्को वर्षको कार्यालय छोड्नुहोस्, जब उनको उत्तराधिकारीले लिन्छ। यद्यपि, यो हो
संदिग्ध छ कि कूपा नेताहरू तल फर्केर आउनेछन्। यो पनि सम्भव छैन
कि, यदि उसले सफलतापूर्वक पुनर्स्थापित गरिसकेको थियो भने, श्री जेलायाले उसलाई त्यागे
पुन: चुनाव योजना। यो सबै को लगभग अवधि को ग्यारेन्टी गर्दछ
हन्डुरस मा गैरकानूनी नियम - र निरन्तर शोषण को
जेभर्सनियनको सम्भावित चैंपियन, श्री चावेज द्वारा स्थिति
लैटिन अमेरिकामा लोकतन्त्र। एल्भारो वर्गास ललोसा को एक वरिष्ठ साथी हो
स्वतन्त्र संस्थान र सम्पादक "गरीबका पाठ।"
एलिजाण्ड्रो हिगारेला आर। भन्छिन्:
मित्र, म तिमीलाई मेक्सिकोबाट लेखिरहेको छु।
म तपाईको ब्लगमा BitCad को बारेमा जानकारीको खोजीमा आएको थिएँ (मैले "FIND" प्रकार्य भेट्टाउन सक्दिन जुन मैले अटोक्याडमा भएको थिएँ) जब सम्म मैले तपाईंको अन्तिम पोस्ट समीक्षा गर्नुभएन जुन मैले धेरै कुरा सिकें:
1.- तपाईं होन्डुरसमा हुनुहुन्छ।
2.- तपाईं सीएडीमा एक विशेषज्ञ हुनुहुन्छ (वा कम्तिमा जुन तपाईले मलाई हेर्नुहुन्छ)
3- तपाई राजनीतिज्ञहरू घृणा गर्नुहुन्छ।
4.- तपाईंको देश क्यान्सर गुजरिरहेको छ।
5.- तपाईं काम गर्नुहुन्छ, राजनीति नगर्नुहोस् वा "ग्रिड" (जस्तो कि हामी मेक्सिकोमा भन्छौं)
र अन्य चीजहरू, तर किनकि मैले पहिले नै काममा लिनुपर्दछ ... म तपाईंलाई भन्नेछु:
तपाईको ज्ञान बाँड्नका लागि धन्यबाद, तपाईले हामी सबैलाई मद्दत गर्नुभयो ... होन्डुरसमा के भइरहेको छ भन्ने मलाई एकदमै थाहा छैन, होन्डुरसको बारेमा मलाई थोरै थाहा छ (मलाई केहि लाग्दैन ... मलाई माफ गर्नुहोस् ...)। तर मलाई थाहा छ यदि होन्डुरन्सले यो वा त्यो शासक वा सरकारको रूप चाहान्छ भने, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका वा अरू कसैले उनीहरूलाई जबरजस्ती गर्नुहुन्न। जे भए पनि। त्यो शुद्ध demagoguery जस्तो लाग्छ। शुद्ध वामपन्थी बयानबाजी। हामी सबैलाई थाहा छ कि यदि राष्ट्रपति (विशेष गरी ल्याटिन अमेरिकी) संयुक्त राज्य अमेरिकासँग सहमत छैनन् भने उनी "निलो हेलमेट", "मरीन" वा त्यस्तै केहीले आक्रमण गर्ने छन्।
शुभकामना र मलाई थाहा छैन कि हामी कुन कुरालाई समर्थन गर्न सक्छौं तर तपाई भन्नुहुनेछ।
नमस्कार र धेरै धन्यवाद।
यसैले अर्को पोस्टमा मैले तपाईंलाई २००१ मा अर्जेन्टिनामा के भयो भनेर बताएँ। मूलतः यो होन्डुरसमा जस्तै थियो; जनता राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यकाल समाप्त भएको चाहँदैनथे। तर (सबै राजनीतिज्ञहरू) यस मुद्दाका लागि "संवैधानिक" चरणहरू अनुसरण गर्न होसियार थिए, अर्थात् विधान सभाको बैठकले राष्ट्रपतिलाई राजीनामा गर्नु सबैभन्दा राम्रो कुरा हो भनेर विश्वस्त थिए। विशेष गरी जब उनले पुलिसलाई प्रदर्शनलाई दबाउन पठाए जसमा उनीहरू मरे। यी तथ्यहरूका लागि, उहाँ आज पनि न्याय भइरहेको छ ... कुरा के हो भने सिद्धान्तमा, जनताको शक्ति स्थापित संवैधानिक संयन्त्रका अनुसार, अर्को व्यक्तिले हस्तान्तरण गर्यो जुन जनताले सिधा चुनेका थिएनन्। सडकमा कुनै सैन्य छैन। त्यसो त त्यहाँ चुनाव र सबै साथीहरु थिए ...
यो स्पष्ट छ कि ल्याटिन अमेरिकालाई भयावह भयानक तानाशाही पछि, सैन्य हिंसाको लागि कुनै सम्भावना वा ठाउँ छैन। सेनाको प्रयोग आज यति अस्वीकार्य छ कि संयुक्त राज्यले पनि - जसले विगतमा ल्याटिन अमेरिकामा कति जना तानाशाही शासनलाई बढावा दिएका थिए र सँभाल्दै आएका छन भन्ने कानूनले स्पष्ट रूपमा भन्यो कि यसले सैन्य कुटपनाले उत्पन्न हुने कुनै पनि सरकारलाई समर्थन गर्दैन। । ओएएस उही हो, त्यसैले किन तिनीहरू ज़ेल्याआ फर्कन्छन् र सबै कुरा घर भित्रै मिलाउन चाहन्छन्। युरोपेली आर्थिक समुदाय समेत "एक पट्टि छ" किनभने उनीहरूको आफ्नै कानून द्वारा तिनीहरूले होन्डुरस मा के भयो पछि कसैलाई चिन्न सकेन। अर्जेन्टिना, ब्राजील, उरुग्वे, चिली, पेरू, इक्वेडर, भेनेजुएला, बोलिभिया, आदि जस्ता यी सर्तहरूमा आफैंले व्यक्त गरेका ल्याटिन अमेरिकी देशहरूजस्तै। आदि (हो, भेनेजुएला र चाभेजका साथीहरू मात्र होइन, सीएनएनले भनेझैं यो सबै ल्याटिन अमेरिका हो)। सेनाबाट सेनापतिले उनको घरबाट राष्ट्रपतिलाई हटाएपछि देशबाट हटाईएको दाबीको कुनै प्रमाणिकता अमान्य भयो। यो एउटा ठूलो गल्ती थियो र तिनीहरूले यसलाई स्वीकार्नुपर्दछ र उनीहरूले गरेका निर्णयहरू बदल्नुपर्दछ किनकि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ज्ञात ओहदा कायम नगरी अरु केहि गर्न सक्दैन। शिकार नहुनुहोस्। "संसार" होन्डुरसको बिरूद्ध छैन। त्यो बाँकी देशहरु र निकायहरु को समझदारी र संगठन क्षमता को कम मूल्यांकन हुनेछ। र मेरो तर्फ, म सीएनएनले जस्तै होण्डुरान जनतालाई हल्का ठान्दिन, विश्वलाई यो सबै चाभेजको विचार, चाभेजको कार्यविधि, चाभेजको उद्देश्यहरू, आदि हो भनेर विश्वास गर्ने नाटक गर्दै। आदि मानौं होन्डुरसका मानिसहरु का आफ्नै विचारहरु, भावनाहरु, चाहनाहरु, आवश्यकताहरु र उद्देश्यहरु छैन।
यदि Zelaya समाप्त हुन्छ कि मांग - केहि महिना अघि - उनको अधिदेश लोकप्रिय र वास्तविक छ, यो समाधान पाउन गाह्रो हुनेछैन। सम्भवतः समाधान: सत्तामा फर्कनुहोस् र संवैधानिक सुधारका लागि अर्को परामर्श संयन्त्रको बारेमा कुराकानी गर्नुहोस्। जे भए पनि, सुधारले अधिकारको उम्मेदवारलाई पनि फाइदा पुर्‍याउँछ। हुनसक्छ उनीहरूले संविधानमा संशोधनलाई स्वीकार्नु पर्दछ तर अन्य संशोधन पनि थप्नुपर्दछ। उदाहरणका लागि, अपराध र शक्तिको दुरुपयोग गर्नेलाई राष्ट्रपति पद समाप्त गर्न बाध्य पार्ने संवैधानिक संयन्त्रहरू समावेश गर्ने अर्थमा - "शक्तिको दुरुपयोग" के हुन्छ भनेर निर्धारण गर्ने। सबै कुरा कानून बनाउन सकिन्छ। यदि होन्डुरस "चाभेज" चाहँदैनन्, तब उनीहरूसँग हुनेछैन। तपाईं बस अधिक रचनात्मक हुनु पर्छ ...
र अब म तपाइँलाई "अर्जेन्टिनियन" मा भनिरहेछु: राजनीतिको साथ गडबडी रोक्नुहोस् र नयाँ ASTER एलिभेसन डाटाको बारेमा पोष्ट गर्नुहोस् सम्पूर्ण विश्वमा कम्तिमा covering० मिटर रिजोलुसन कभर गर्दै।
सबै हन्डुरस को लागि एक गलीचा ..
धन्यवाद मेरो साथी गेरार्डो, म अन्तरराष्ट्रीय संगठनहरु को बारे मा शिकायत गर्न को लागी बहाना छैन।
थप मेरो गुनासो के छ कि यो सबै दot्गा राजनीतिज्ञहरुको गल्ती हो, केहि गर्न को लागी, अधिक गर्नु हुँदैन। प्रजातन्त्र शव्द बाहिरका हितका लागि अब हामी सबैलाई संसारभर नै निन्दा गरिन्छ।
मलाई आश्चर्य छ कि संयुक्त राष्ट्र संघले त्यस्तो ध्रुवीकरण गरिएको स्थितिमा के गर्नेछ र सचेत रहन्छ कि दुबै छेउछाउको स्थिति "थोरै" रहेको छ र सहिष्णुताको सम्मानमा धेरै सही छ। मूलतः, हामी सबै अन्तहरूसँग सहमत छौं, तर दुबैको कार्यविधिहरूमा धेरै अनुत्तरित प्रश्नहरू छन्।
म फेरि डन अल्भारेज हुँ ...
म हन्डुरसमा हालको अवस्थामा मेरो अघिल्लो टिप्पणीहरूमा थप्न चाहानुहुन्छ कि प्रत्येक व्यक्तिले उनीहरूको चाहनाको छनौट र आकार निर्धारण गर्ने अधिकार छ। त्यसैले म यस कुरामा आश्वस्त छु, उदाहरणका लागि, मलाई अमेरिकी बहानाले अफगानिस्तानको आक्रमणलाई बिजनेस गर्न आदेश दिईयो।
तथ्य यो हो कि होन्डुरसमा जे भएको छ त्यो गहिरो र अधिक विस्तृत विश्लेषणको योग्य छ। तपाईको देशमा के हुन्छ मलाई के भयो भनेर तपाईं सोचिरहनुहुनेछ। तर मुद्दा त्यहाँ हुँदैन। अर्जेन्टिनाको अन्तिम तानाशाही शासनको क्रममा मैले आफैलाई हताश र क्रोधित भएँ, किन कुनै पनि देशले वास्तविक सरकारलाई बेवास्ता गरे र सत्ता हटाउनकोलागि टाढा राखेनन्। र मँ तपाईका अधिकांश देशवासीहरूको बारेमा सोच्दछु जसले स्पष्ट रूपमा जलयलाई मतदान गरे। उनीहरू के सोच्दैछन्। र म ल्याटिन अमेरिकाका धेरै आर्थिक रूपले शक्तिशाली अल्पसंख्यकहरूको पिछडिएको टाउकोको बारेमा सोच्दछु र उनीहरूले कसरी उनीहरूको देशहरूमा त्यस्तै गर्न सक्षम हुने सपनाहरू झेल्नु पर्छ। तपाईं जीवहरूको बारेमा गुनासो गर्नुहुन्छ। म तपाईंलाई सोध्छु: यदि तपाईंले राष्ट्र न्यायाधीशलाई जबरजस्ती गर्नुभयो र तपाईंले अपराधको बारेमा पत्ता लगाउनु भयो भने। यद्यपि कसैले यो रिपोर्ट गरेको छैन। तपाईं उसको बारेमा पत्ता लगाउनुहोस्। तपाई के गर्दै हुनुहुन्छ? ठीक छ, तपाईंले "Office" कार्य गर्नु पर्छ। किनकि तपाईं एक न्यायाधीश हुनुहुन्छ। तपाईंले पक्ष लिनु पर्ने दायित्व छ। तपाईं अर्को तरिकाले हेर्न सक्नुहुन्न। के होन्डुरस मा भएको छ, एजेन्सीहरु जारी गर्न बाध्यता। उनीहरूसँग कुनै विकल्प छैन। र अनुमान लगाउनुहोस् कि तिनीहरूले कुन आसन लिनुपर्दछ?
सबैले विश्वास गर्छन् जुन तिनीहरू विश्वास गर्न चाहन्छन्, होइन र? म तपाईंलाई आफ्नो भ्यान लिन र शहर को उत्तर पूल हेर्न जान आमन्त्रित गर्दछु। तपाईंको ब्रेकको फोटो लिनुहोस्। म पक्का छु कि तपाईको क्याडस्ट्रल पेशेवर आँखाले तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ कि बाढी भाँचेको छ (जस मध्ये धेरै अंक हुनुपर्दछ) वा सेनाले विस्फोटकको साथ उडायो। विश्वास नगर्नुहोस् कि "बाहिर" हामीलाई के हुन्छ थाहा छैन के हुन्छ। हुनसक्छ एक युवा स्पेनिश पाठकलाई तपाईंको देशमा के भइरहेको छ भन्ने बारे "विचार" नहुन सक्छ। तर ल्याटिन अमेरिकाका मानिसहरु जसले शक्ति संरक्षणको लागि केही अल्पसंख्यकहरुको संयन्त्र जान्दछन्, हामीलाई थाहा छ के हुन्छ। यो Alvarez चेतना को कुरा हो। तपाईं आफैले यसलाई पहिलो पोष्टमा पहिचान गर्नुभयो। तपाईं सामाजिक withणको साथ बाँच्न जारी राख्न सक्नुहुन्न। जसले सत्य लुकाउँछ उसले आफू गलत हो भनेर जान्दछ।
मेरो सबै टिप्पणी पोस्ट गर्नु भएकोमा धन्यवाद। सबै पछि, यो तपाईंको ब्लग हो ...